Bingofest review Mey 2022 | Bingo77 Madagascar
Efa nandinika Bingofest araka ny bingo toerana ', rafitra ambony toy ny bingo TSARA toerana. Izany dia midika fa ho mety manana traikefa Tsara raha misafidy ny milalao eto. To marika Bingofest maha tsara toerana, efa teny ny lazan'ny ny fahazoan-dalana, ny isan'ny mpitsidika isam-bolana ny toerana manana, tombony politika izany ampiharina. Jereo ny tsipiriany sasany eto ambany ary manapa-kevitra na an-tserasera izany Casino mendrika mitsidika na tsia.
Bingofest naorina tamin'ny 2003 sy amin'izao fotoana izao niasa ny VistaGaming Network . Izany miasa eo ambanin'ny Curaçao fahazoan-dàlana, izay manana laza fa miteraka resabe. Ny tranonkala dia manana 7 vonona-to-milalao bingo efitra sy ny tolotra manokana ny sasany bingo lalao. Ny tena teny amin'ny toerana no teny anglisy sy tsy misy safidy hafa misy. Bingofest mamela PayPal withdrawals sy ny maro hafa ihany koa fomba fialana.
Loka anilan'ny kamory tao Ice Cream Bingo Tourney
Curaçao filokana fahazoan-dalana
Bingofest kely bingo toerana, na izany aza, dia manana manaiky famolavolana ho an'ny finday avo lenta sy ny takelaka. Torolalana manan-danja rehetra, anisan'izany ny tombontsoa sy ny fanesorana ny politika, dia nampahafantatra mazava tsara sy manome fanazavana ny antsipirihany. Mba manokatra kaonty ianao, dia ho nangataka mba hanamarinana ny toetra. Miorina amin'ny fanazavana momba izany ny vohikala sy ny ambony, dia fahazoan-dalana Bingofest ho an'ny newbies sy ny matihanina amin'ny aterineto bingo mpilalao. Izany no tsara Casino-tserasera ary dia azo inoana fa manana traikefa lafiny tsara milalao eo amboniny.
Small bingo toerana malaza amin'ny firenena vitsy
Tsotra fisondrotana 'fepetra
Manaiky famolavolana ny finday avo lenta sy ny ordinatera
Tsy ny rehetra taratasy fanamarinana dia azo fijerena
Ihany no voasoratra anarana mpampiasa dia afaka hifandray fanohanana